गरिव भएकै कारण राजा वीरेन्द्रलाई विवाह गर्न कन्या दिइएन ! – Everest Dainik – News from Nepal
गरिव भएकै कारण राजा वीरेन्द्रलाई विवाह गर्न कन्या दिइएन !
त्यसैताका राजा महेन्द्र शाहले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै नारायणहिटी राजदरवार तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बेचेका थिए । राजा महेन्द्र शाहले नौं करोडमा (९ देखि १२ करोड ठ्याक्कै थाहा हुन नसकेको) बिक्री गरेको र सरकारले उक्त दरवार राजाको निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको समाचार गोरखापत्रमा नै छापिएको थियो ।
त्यसको एकरदुई वर्षपछि राजा महेन्द्र शाहको निधन भयो । युवराज वीरेन्द्र शाह राजा भए । सिद्धान्ततः राजा वीरेन्द्र शाहले प्रत्क्ष शासन गरेको ७र८ वर्ष मात्रै हो । त्यसपछि पञ्चायतले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ग¥यो । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी थिए ।
राजा वीरेन्द्र शाहको ८७ अर्बको सम्पत्ति कसरी आयो रु त्यसबारे मुलुकले जान्न पाउनु पर्दछ । राजा वीरेन्द्र शाहको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्ने सरकारी अड्डाले आफ्नो काम देखाउन सम्पत्तिको आंकडा एकदम बढाईरचढाई प्रस्तुत गरेको हो कि ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ ।
स्वर्गीय राजाको जनतामा रहेको प्रतिष्ठा र लोकप्रियता समाप्त पर्ने कुनै षड्यन्त्र हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ । राजा वीरेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार गरेकै हुन् रु कसैले बताइदिनु प¥यो नी । भन्दै समाजिक सञ्जाल यतिबेला तातेको छ ।
त्यो ८७ अर्बको सम्पत्ति सरकारमा आएपछि महालेखा परीक्षाको दृष्टिमा त्यो सम्पत्ति आयो होला । संसदलाई त्यसको जानकारी हुनुपर्ने हो । त्यो ८७ अर्बको विवरण मुलुकलाई दिन मिल्दैन रु भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस निकटका प्रा।केशवप्रसाद भट्टराईले पनि राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिका बारेमा आएको आँकडाप्रति आशंका जनाएका छन् । उनले सो विषयमा यथार्थ कुरा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
ट्याग्स: King birendra shah